नेपालमै यस्तो ! मदिरा बेच्नेलाई १०, खानेलाई ५ हजार जरिवाना - Nepali Headlines,Nepal News, Nepali News, News Nepal
नेपालमै यस्तो ! मदिरा बेच्नेलाई १०, खानेलाई ५ हजार जरिवाना
२० कात्तिक, डोटी । जिल्लाको शिखर नगरपालिका वडा नं १ कपल्लेकीले आफ्नो वडामा मदिरा बिक्री वितरण गर्ने तथा खानेलाई कारवाही गर्ने भएको छ । सो वडाका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका नेता, समाजसेवी, स्थानीयवासीको मङ्गलबारको बैठकले वडाभरिमा मदिरा बिक्री वितरण व्यापक भएको भन्ने गुनासो आएपछि बिक्री वितरण तथा सेवनमा रोक लगाएको हो ।
वडाभरिमा मदिरा बिक्री वितरण गर्नेलाई रु १० हजार र खानेलाई रु पाँच हजार जारिवाना तिराउने निर्णय गरिएको वडाध्यक्ष खड्कबहादुर शाहीले बताए । उनले भने, ‘वडाको निर्णय अटेर गर्नेलाई कानूनबमोजिम सजाय हुनेछ ।’ वडामा मदिराका कारण विभिन्नखाले घटना तथा घरेलु हिंसा बढेको गुनासो आउन थालेपछि उक्त निर्णय गरिएको वडाध्यक्ष उनले जानकारी दिए ।
पछिल्लो समय जिल्लामा प्रहरी, प्रशासन तथा स्थानीय तहले आ–आफ्ना क्षेत्र तथा वडामा धमाधम मदिरा नियन्त्रण अभियान सञ्चालन गरेका छन् । यो वर्ष मात्रै मदिराका कारण कम्तीमा पनि एक दर्जन घटना भइसकेका प्रहरीको तत्थयाङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । मदिरा नियन्त्रणका लागि विभिन्न खाले पहल भइरहे पनि गाउँमा लुकीछिपी बिक्री वितरण गर्नेका कारण समस्या हुँदै आएको प्रहरीको भनाइ छ । रासस
Previousलुटेरा समूहद्वारा पति–पत्नीकाे हत्या
Nextट्याक्सी भन्दा महंगो भाडा तिरी गाडी चढ्छन् बाजुराबासी, १ किलोमिटरको भाडा कति ?